इलिनोइसमा तपाईंको क्यानाबिस इजाजतपत्र अस्वीकारको लागि कसरी अपील गर्ने - के नगर्नुहोस् जब तपाईं जीत गर्नुहुन्न।
by टम | सेप्टेम्बर 6, 2020 | अवर्गीकृत
भर्ना गरिएको छैन
टोम द्वारा "भांग उद्योग वकील" हावर्ड
यो कोर्सको अन्त सम्ममा, तपाइँ:
मस्यौदा--गणना उजुरी छ।
तपाईंलाई थाहा छ यो कहाँ फाइल गर्ने,
जब यो फाइल गर्नु पर्छ।
के हुन सक्दछ जब तपाईं गर्नुहुन्छ,
र कसरी तपाइँलाई मद्दत गर्न एक स्थानीय वकिल खोज्ने।
हामी तपाइँको सामनाको साथ सम्बन्धित खर्चहरू पनि छलफल गर्नेछौं।
प्लस तपाईं एक को लागी एक फारम प्राप्त गर्नुहोस् अस्थायी संयमित आदेश (TRO) र an एक TRO को लागी आपतकालीन गति। लोटरी रोक्नको लागि - वा प्रयास गर्नुहोस्।
अन्तमा, कार्यका दुई कारणहरू केपीएमजीले गलत तरिकाले तपाईंको आवेदन स्कोरिंगले भान्साको उद्योगमा लगेको पैसा फिर्ता लिन खोज्छन् - यदि वास्तवमै तपाईंलाई के भयो भने।
हामी मुद्दा पनि हाल्ने बाहेक तपाइँले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि छलफल गर्छौं - सीआरटीए संशोधन गरी र तपाइँको अनुप्रयोगहरू अद्यावधिक गर्दै।
ग्राहकहरूको लागि $ २,००० रिटेनर क्रेडिटको साथ आउँदछ जुन उनीहरूको अधिकारको रक्षाको साथ अगाडि बढ्न चाहन्छ।
मात्र पहिलो १० मा ईनरोल छुट पाउन छुट।
त्यसोभए तपाईको अनुप्रयोग "उत्तम" थिएन
केवल २१ टिमहरू भविष्य इलिनोइस औषधालय धारक हुनको लागि छनौट भयो।
तपाईंको टोली सूचीमा थिएन, जस्तै अन्य%%% आवेदकहरू।
तपाईं gyped र अन्याय महसुस गर्नुहुन्छ।
यदि तपाईं एक सामाजिक इक्विटी दिग्गज हो, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं।
यदि तपाईं नियमित सामाजिक इक्विटी आवेदक हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई पनि मद्दत गर्न सक्दछौं।
सामाजिक इक्विटी एक्लो पर्याप्त थिएन
तपाईंको रणनीति परिवर्तन हुनेछ यदि तपाईं एक सामाजिक इक्विटी अनुभवी आवेदक हो, वा केवल नियमित रूपमा।
नियमित सामाजिक इक्विटी आवेदकहरूको लागि सडक धेरै महँगो छ, तर यो ठीक छ किनकि हामी केवल गुनासो भन्दा पनि बढी प्रदान गर्दछौं, हामी केहि विधायी संशोधनहरू प्रदान गर्दछौं जसले यसलाई खोल्दछ।
तपाईं यो कोर्सबाट के प्राप्त गर्नुहुन्छ
यो कोर्सको अन्त सम्ममा, तपाईंसँग ड्राफ्ट--गणना उजुरी हुनेछ। तपाईं कहाँ फाइल गर्ने भनेर थाहा पाउनुहुनेछ, जब यो फाइल गर्नुपर्नेछ। के हुन सक्छ जब तपाइँ गर्नुहुन्छ, र कसरी तपाइँलाई मद्दत गर्न एक स्थानीय वकिल खोज्ने। हामी तपाइँको सामनाको साथ सम्बन्धित खर्चहरू पनि छलफल गर्नेछौं।
त्यस भन्दा बढि तपाईसँग एउटा अस्थायी रोकावट आदेश (TRO) र TRO को लागी आपतकालिन गति हुन्छ।
एक TRO ले लटरी रोक्न सक्छ, वा राज्य लाईसेन्स लाइसेंस - जब सम्म तपाइँको आवेदकको स्कोर को प्रशासनिक समीक्षा सम्म।
हामी मुद्दा हाल्ने कार्य बाहेक तपाइँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छलफल गर्दछौं। हामी FOIA अनुरोध प्रक्रियामा जान्छौं ताकि तपाईं आफ्नो स्कोर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र फेरी दुईको लागि यसलाई सुधार गर्न सुरु गर्नुहोस्।
तर पर्खनुहोस्, राउन्ड २ लाई CRTA को सामाजिक इक्विटी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न परिवर्तन आवश्यक छ।
हामीले अर्को राउन्डको इजाजतपत्र संख्या १० बाट क्याप गर्नुपर्नेछ जुन 10०० भन्दा बढी टोलीहरू मध्येबाट २१ जनाको लगजमले निम्त्यायो।
यदि हामी सीआरटीए, वा यसको नियमहरू संशोधन गर्छौं भने हामी राउन्ड २ मा अधिक सामाजिक समानताको लागि ढोका खोल्न सक्छौं।
हुनसक्छ अर्को पटक teams 55 टीमहरू वा बढी इलिनोइसको एउटा बहुमूल्य गांजा डिस्पेंसरी लाइसेन्सको साथ टाढा हिंड्न सक्दछन्।
तपाइँ तपाइँको TRO र उजूरीको ड्राफ्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ, एफओआईए अनुरोध واکथ्रु, र संशोधन भाषा, तपाइँले पाठ्यक्रम लिइसक्नु भएपछि र डु the्गालाई बुझ्नु भएपछि तपाइँ कहाँ हुनुहुन्छ र यसले पछि तपाइँलाई लिन सक्छ।
मुद्दा मुद्दा बाट लागत को समझ
FOIA तपाईंको स्कोर को लागी अनुरोध
राउन्ड २ लाई ठीक गर्न संशोधन भाषा
भाग्यको उत्तम, मद्दत गर्न पाउँदा खुसी छ
अन्त्यमा, मुद्दा लगाउन जहिले पनि अप्रत्याशित हुन्छ - तपाईं जित्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको हार हुन सक्छ - तर जुन तरिका यो समय लिन्छ र धेरै महँगो हुनेछ।
इलिनोइसमा भांग डिस्पेंसरीको लागि तपाईंको आवेदन अस्वीकारको बारेमा केहि कसरी गर्ने भन्ने बारे वास्तविक तथ्यहरू पाउनुहुनेछ।
के तपाइँ KPMG बाट तपाइँको लगानी फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईंले धेरै पैसा खर्च गर्नुभयो र केपीएमजीले तपाईंको गुनासो गलत गर्नुभयो भने, गुनासो3र in गणनामा उनीहरूको विरुद्ध कारबाहीको कारणहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
तपाईंको अनुप्रयोगको अपीलको साथ मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्
सामाजिक इक्विटी वा सामाजिक इक्विटी दिग्गज
तपाई कस्तो प्रकारको सामाजिक इक्विटी हुनुहुन्छ? १ शीर्षक	|	1 प्रश्नोत्तरी
0% पूरा	0 / 1 चरणहरू
सामाजिक इक्विटी दिग्गज वा होईन
अपील गर्न लागतहरू
अपीलको लागत के हो?
के यो कक्षा कार्य हो?
प्रशासनिक समीक्षा लागत 1 प्रश्नोत्तरी
तपाईंको केस अपील गर्नका लागि कस्ता लागतहरू लाग्छन्?
FOIA तपाईंको आवेदन स्कोर अनुरोध गर्नुहोस्
कसरी FOIA अनुरोध तपाईंको स्कोर (हरू)
न्यायक्षेत्र, स्थान र स्थायित्व
स्थायी र स्थान
केस को सिद्धान्तहरु
Injonctive Relif -TRO & Prelim Injitions
प्रशासन समीक्षा उल्लंघन
KPMG को विरुद्ध सम्पर्कको उल्लंघन
केपीएमजी बिरुद्द ब्यापार अपेक्षेपको Tortious हस्तक्षेप
सामाजिक इक्विटी रक्षा गर्न CRTA मा संशोधन
दोस्रो राउन्ड इजाजतपत्र क्याप्स र भेटेरर सीमाहरू
स्कोर समीक्षा अवधि
दोस्रो मतको लागि समय
अब तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ?
यस कोर्स को लागी लगईन चाहिन्छ। कृपया तल तपाइँको पत्यारपत्रहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्!